Rafi-drafitra - Teknolojia fampiharana Delta
Archive avy amin'ny sokajy "rafitr'asa"
Ny fametrahana fanamoriana fiaramanidina mahazatra dia namboarina mba handrakofana rindran-tsary maro samihafa.Ireo dia afaka ampiasaina handrindrana ireo aretin-kiraro, varnis sns sns.
Raha mila fanazavana fanampiny, antsoy ny ekipan'ny mpivarotra.
Published in Rivotra mifono rivotra
Ireo rafitra fametrahana amin'ny rantsankazo mba hampihatra ny hoso-doko, adhesive ary ny tsiranoka ambany kely amin'ny alàlan'ny fitrandrahana rivotra. Azo ampiasaina ara-dalàna ny automatique tanteraka, arakaraka ny filanao sy ny fizotran'ny famokarana.
Mifandraisa amin'ny ekipanay mpivarotra raha mila fanazavana fanampiny.